Qalabka lagu daro mashiinnada tolida, waxyaabaha daruuriga ah
ka mashiinada dharka lagu tolo Waxay leeyihiin moodallo aan dhammaad lahayn iyo dhawr qaybood oo muhiim ah mid kasta oo iyaga ka mid ah. Inkasta oo ay yihiin kuwo aasaasi ah, sida aynu nidhaahno, waxay noqon lahayd waxba dhammaantood iyaga oo aan lahayn qalabyada. Sababtoo ah si aan hawsheenna u gudanno, waxaan u baahanahay maro wanaagsan, dunta ay qaadi doonto iyo cirbadaha siinaya tolida. Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo, labadaba mashiinkaaga iyo mala-awaalkaaga, waxaanu ku tusi doonaa halkan.
ka irbado mashiinada tolida aad bay u kala duwan yihiin. Laakiin kiiskan, waxaa habboon in had iyo jeer la iibsado kuwa leh tayada ugu sareysa. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah waxay noqon doonaan kuwo adkaysi u leh waxayna naga caawin doonaan inaan sawirno tolmo kaamil ah.
cirbadaha fudud: fudud iyo hal tol.
irbado laba jibaaran: sida magaceeda ka muuqata, waa laba tol. Loogu tala galay shaqada qurxinta.
cirbadaha saddex-geesoodka ah: ee saddex tol ah, in kasta oo ay xoogaa aad u adag tahay in la helo.
wareegsan oo af badan: Waa dhibic aad u fiican waxayna siin doontaa tolmo toos ah. Tani waxay yareeyn doontaa hargabka.
wareega caadiga ah: Waxaa lagu tilmaamay dhar caadi ah oo aan aad u dhumuc weynayn.
kubad yar: Dharka khafiifka ah ee khafiifka ah waa midka yeelan doona irbad noocaan ah.
kubad dhexdhexaad ah: Maro yar oo dhumuc weyn leh, waxaad mar hore u baahan doontaa nooc irbad sidan oo kale ah.
kubad weynLaakin maro aad u dhumuc weyn, iyo sidoo kale kuwa fidsan, waxay u baahan yihiin cirbadda bar ee weyn.
Irbadaha waxay leeyihiin laba lambar oo tilmaamaya dhumucda irbadda. Inta ugu badan ee tirooyinka waxay u dhigantaa waxa loogu yeero celceliska Yurub. Halka tirada hoose ay u dhiganto celceliska Maraykanka.
Midka Yurub wuxuu ka socdaa lambarka 65 ilaa 120 halka kan Maraykanku uu ka tago lambarka 8 ilaa 20. Si loo doorto cirbadda, waa inaan ka fikirnaa dhumucda dharka. Tusaale ahaan, irbad 60/8 ayaa noqon doonta cirbadda ugu fiican. Sidaa darteed, waxaa lagu tilmaamaa dhar jilicsan oo siman sida xariir. Haddii aad leedahay maro suuf ah, waxaad dooran kartaa 70/10 irbad. Inta lagu jiro dharka denim, waxaad tixgelin kartaa cirbadda 110/18.
Hadda oo aad taqaanid sida loo doorto cirbadaha mashiinka dharka lagu tolo, waxaan kuugu daynaa dhowr xirmo oo aad u xiiso badan:
Xidhmada caalamiga ah ee cirbadaha ee cabbirro kala duwan
Mashiinka Caalamiga ah...
dunta mashiinada tolida
Waad ku mahadsan tahay dunta tolida, waxaan ku yeelan karnaa tolida dharka. Taasi waa sababta ay tahay inaan mar walba dooranno kuwa ugu fiican si aan u helno natiijooyinka ugu yaabka badan sida kuwa ka mid ah noocyada kala duwan ee dunta aan ku talineyno.
Kala soocida dunta
Karaa dabiiciga ah ama synthetic. Midda ugu horreysa ee sida badan loo isticmaalo waa suuf. Kuwa ka samaysan fiilooyinka synthetic sidoo kale aad bay u adkaysanayaan. Ma saameyn doonaan qoyaanka ama kiimikooyinka, sidaas darteed sidoo kale waa lagama maarmaan.
Haddii aan isticmaalno dun tayo wanaagsan leh, waxaan ogaan doonnaa in ay ka xoog badan tahay xiisadda, si la mid ah, ma yeelan doonto guuldarrooyin badan oo dharku wuu fududaan doonaa. Kuwa aan aragno waa kuwan soo socda.
Gütermann gariiradda 250: polyester tayo aad u wanaagsan
Gütermann mini-cone 1000: Way ka yara jilicsan tahay oo way ka fiican tahay tii hore, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay tolida mashiinka.
gariiradda jilicsanTani waa dun cudbi ah, sidoo kale mashiinka. Waa wax yar oo qaali ah, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa sida dunta qurxinta.
dun laastikada: Waxay ku habboon tahay tolidda waxaana la dulsaaraa bobbin.
dun qalloocan: Waa dun dhumuc weyn waxayna ku fiicnaan doontaa tolida dharka denimka.
Alzetta Assortment ee 64...
Kuwa bilawga ah iyo kuwa raba inay u oggolaadaan fikradooda inay ku socdaan duurjoogta, buuggu had iyo jeer waa xulafadooda ugu fiican.
KITAABKA WAYN EE... Eeg astaamaha 861 Fikradaha Eeg bixinta
Baybalka Macallimiinta ee... Eeg astaamaha 103 Fikradaha Eeg bixinta
Buuga tolida: goynta iyo... Eeg astaamaha 13 Fikradaha Eeg bixinta
NIDAAMKA SALDHIGGA... Eeg astaamaha 255 Fikradaha Eeg bixinta
Todoba irbadood oo tolida ah... Eeg astaamaha 115 Fikradaha Eeg bixinta
Tollida (Hagaha... Eeg astaamaha 44 Fikradaha Eeg bixinta
Ugu fiican	KITAABKA WAYN EE...
Tayada qiimaha	Baybalka Macallimiinta ee...
Waxaan jecel nahay	Buuga tolida: goynta iyo...
Todoba irbadood oo tolida ah...
Mashiinka tolida iyo aniga
Mid ka mid ah iibinta buugaagta waa kan. Tani waa sharraxaad ku habboon qof kasta oo iibsaday mishiinkoodii ugu horreeyay ee dharka. Farsamooyinka iyo mashaariicda ayaa saldhig u ah nuqul kan oo kale ah oo ku farxi doona qof kasta oo gacantiisa ku haysta.
Buug-gacmeedka tolida oo dhammaystiran
Buug-gacmeedka oo dhamaystiran
Si loo ogaado farsamooyinka tolida aasaasiga ah, ma jiraan wax la mid ah buug si fiican loo sharraxay, oo leh tallaabo tallaabo. Sharaxaad sax ah halka cutub kasta si fiican loogu sawiray.
Haddii ay dhacdo inaadan weli caddayn, ma jiraan wax la mid ah a hage sawir leh. Waad ku mahadsan tahay, waxaad baran doontaa shaqooyinka aasaasiga ah ee mashiinka, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u malaynayso.
Hadaad jeceshahay fashion oo aad durba ka fekereyso dhammaan dharka aad adigu sameysan karto, ha seegin buug kan oo kale ah.
Cath Kidston. tol!:...
41 mashruuc oo tolid ah, oo leh naqshado aad u fiican iyo tilmaamo badan ayaa noqon doona waxa aad ka heli doonto buug sidan oo kale ah.
Si loo helo dhammaan agabyada lagama maarmaanka ah, ma jiraan wax la mid ah xirmada tolida. Sidan, waxaan ku heli doonaa wax kasta oo aan u baahanahay hal tallaabo. Waxa kale oo ay ku fiicnaan doontaa in la qaado marka aan safar ku baxayno, sababtoo ah ma ogid waxa aan u baahanahay. Badanaa waxay leeyihiin dhowr gariirood oo dun ah oo midabo kala duwan leh. Sibadaha, irbadaha, maqasyada ama cabbirada cajaladaha midkoodna lama waayi karo.
Haddii aad u baahan tahay xidhmo tolid, eeg labadan midkood:
80 Qalabka Tolida
Qalabka Tolidda ee Qisiewell...
Qalabka BoRui 58pcs...
ka maro ka jilicsan, jilicsan oo jilicsan, waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marka ay timaado tolida mashiinka. Waxaad u baahan doontaa tolmo fidsan maadaama ay yihiin kuwa ugu muuqda. Sidoo kale, xusuusnow inaad isticmaali doonto cirbadaha caadiga ah iyo kuwa fiican. Markaad tolidayso, waa inaad si tartiib ah uga soo jiidataa maradan, labadaba xagga hore iyo xagga dambeba. Waxaas oo dhami waxay ka ilaalin doonaan dharka noocan ah inuu ku dhammaado puckering.
maro qaro weyn
Xaaladdan oo kale, waxaa ugu wanaagsan in la doorto mashiinnada dharka lagu tolo ee loogu talagalay dharka noocan oo kale ah. Waxaa ka mid ah labadaba dharka denimka sida xargaha, dhogorta, ama shiraac. Marka lagu daro mishiinka awoodda weyn, dunta dhumucdiisuna sidoo kale waa lagama maarmaan iyo dabcan, irbad sida waafaqsan dharka noocan oo kale ah. Had iyo jeer waxaa habboon in la dhaqo oo la kariyo ka hor inta aan la tolin.
Qalabka kale ee muhiimka ah
Si loo dhammeeyo liiska agabka loogu talagalay mishiinnada tolidda, waxaanu kuugu daynaa alaab kale oo muhiim ah:
Sanduuq leh 25 bobbins...
gooyaha mindida dharka
Mashiinka dharka » Gargaarka